Taliyaha qeybta 43-aad ee ciidamada xoogga soomaaliyee oo sheegay inay u diyar garobeen dagaal ka dhan ah Al-shabaab
Taliyaha Qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya General Ismaaciil Saxardiid oo booqasho ku tagay Degmada Dhoobley oo ka tirsan Jubbaland ayaa kormeeray saldhigyo halkaasi ay ku leeyihiin Ciidanka Xoogga dalka.
Taliye Saxardiid ayaa sheegay ujeedka socdaalkiisa inuu ahaa sidii Ciidamada ay u gaarsiin lahaayeen Qalab Millitari oo ay ku jiraan Hub iyo Gaadiidka Dagaalka iyo Mushaarka Ciidamada ay xaqa u leeyihiin.
Wuxuu sheegay Ciidamadan ka tirsan xoogga dalka in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada Dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-shabaab, maadaama dhowaan uu u soo gaba gaboobay Tababar.
Xubnaha dhalinyarada ah ee ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayuu ugu baaqay in ay ku soo biiraan Dowladda Federaalka, si cafis guud loogu sameeyo, dadkoodana ay ugu dhex noolaadaan
Guud ahaan Gobolada dalka soomaaliya waxaa ka socda abaabulka iyo diyaar garowga ku aadan gulufka colaadeed ee ka dhanka ah xarakada Al-shabaab, maadaama Madaxda Qaranka ay ku dhawaaqeen Dagaalka dhanka ah Shabaab.
← Kiisas dhan 53 oo la xariira daacuunka oo laga soo tabiyay ismaamulka Embu
DHAGEYSO warka subaxnimo ee star fm 6-12-2017 →